Topnepalnews.com | पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र दिल्लीबाट फर्कनासाथ भूमिगत !
Posted on: May 03, 2016 | views: 412
भारतको औपचारिक एवं रहस्यमयी निम्तो मानेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह शनिबार नेपाल फर्किए । तर, सोमबार दिउँसोसम्म निर्मल निवासमा उनको अत्तोपत्तो छैन । उनी नागार्जुन पनि उक्लेनन् । पोखरातिर पनि लागेनन् । आखिर दिल्लीबाट फर्कनासाथ कहाँ गए त पूर्वराजा ?
आइतबार महाराजगञ्जस्थित निर्मल निवासको गेटमा निकै ठूलो भीडभाड थियो । मधेसबाट बस रिजर्भ गरेर आएका केही मानिसहरु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । नेपाल राष्ट्रवाद संघ वीरगञ्जको नाममा उनीहरुले ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर राजतन्त्र फर्काउने आग्रह गर्न काठमाडौं आएको बताउँदै थिए ।
तर, निर्मल निवासमा रहेका सुरक्षाकर्मी र पूर्वराजाका सहयोगीहरुले शाह निवासमा नरहेको जानकारी गराउँदै उनीहरुलाई मुस्किलले फर्काए । र, अबदेखि आउँदा फोन गरेर, समय मिलाएर मात्रै आउन आग्रह गरेपछि उनीहरु रित्तै फर्किए । कतिपय अझैसम्म राजधानीमा छन् र निर्मल निवासको गेटमा धाइरहेका छन् ।
स्रोतको दाबी अनुसार दिल्लीबाट शनिबार फर्किएपछि पूर्वराजा मुग्लिनतिर लागेका छन् । तर, मुग्लिनमा पूर्वराजा बस्ने ठाउँ छैन । पूर्वराजपरिवार स्रोतले मुग्लिनतिर देखाए पनि पूर्वराजा नुवाकोटतर्फ लागेको स्रोतले बतायो । उनी सोमबार साँझ राजधानी फिर्ने स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
विमान ‘डिले’ हुँदा शनिबारसम्म बसाइ
भारतीय सत्तारुढ पार्टीका राजनाथ सिंह लगायतका उच्च तहका नेताहरुको निम्तोमा पूर्वराजा विहीबार दिल्ली गएका थिए । उनी शुक्रबार नै काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम थियो ।
तर, शुक्रबार बिहान ९ बजे उड्ने भनिएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान दिउँसो १ बजेमात्रै उडेका कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शनिबारमात्रै नेपाल फर्किएको स्रोतले बतायो ।
प्रचण्ड गएनन्, ज्ञानेन्द्र गए
भारतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई किन निम्तो दियो भन्ने रहस्य अहिलेसम्म पटाक्षेप हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान र नेताहरुको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको यो भ्रमणलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।
त्यसो त भारतले सत्तारुढ दल एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भ्रमणको निम्तो दिएको थियो । तर, अहिले दिल्ली जाँदा राष्ट्रवादी जनमतबाट आलोचित हुने डरका कारण प्रचण्डले दिल्ली भ्रमण अस्वीकार गरे ।
प्रचण्डले अस्वीकार गरे पनि ज्ञानेन्द्रले भने दिल्लीको निम्तो स्वीकार गरेका छन् । सूत्रहरुका अनुसार मधेसी र जनजातिलाई मिलाएर आन्दोलनमार्फत सरकारलाई दबाव दिने रणनीतिमा रहेको दिल्ली यतिबेला सरकारविरोधी यो मोर्चामा ज्ञानेन्द्रको ‘कार्ड’ समेत प्रयोग गर्न चाहन्छ भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।